Hyperprolactinaemia နို့ထွက်ဟော်မုန်းများခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မေးခွန်း (၁) သမီးရဲ့အသက်က ၃၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကျတာက တော့ ၂ နှစ်ခွဲရှိပါပြီ။ ဆေးလဲတခါမှမသောက်ဖြစ်ပါ။ ဆေးခန်းတွေပြတော့ ဆေးစစ်ခိုင်းပါတယ်။ prolactin အရမ်းများနေတယ် ပြောတယ်။ 200 ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုတခါထပ်ပြတော့ ct scan ရိုက်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ သိချင်လို့ပါဆရာ။ ကလေးလဲ ရချင်ပါတယ်ဆရာ။ ပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
မေးခွန်း (၂) သမီးအသက်၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်တော့မရှိပါ။ ချစ်သူတော့ရှိပါသည်။ ၉ လပိုင်းဝန်းကျင်ကစပြီး သမီးရင်ဘတ်မှ နို့ရည်ကြည်များထွက်တာသတိထားမိပါသည်။ တပတ်ကျော်လောက်ထိ ဆက်တိုက်ထွက်နေသောကြောင့် သားဖွားမီးယပ်နှင့်ပြရာ ဦးနှောက်မှဟော်မုန်းတမျိုးထွက်တာများလျှင်ဖြစ်တတ်ကြောင်း prolatin level စစ်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။ 14.9.2012 မှ result သည် 127.8 ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ဆရာမထံသို့ ပြသရန် ပြောခဲ့ပါသည်။ 25.9.2012 တွင်ပြသခဲ့ရာ MRI နှင့် အခြားလိုအပ်သော စစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်ခိုင်းပြီး parlodel 25mgဆေးကို တနေ့တလုံးသောက်ရန် သုံးရက်စာပေးလိုက်ပါသည်။ 28.9.2012 တွင် MRI result (1. Prolatinoma about 4.0mm x 6.0mm at central region of pituitary gland. 2. Remaining study is normal) ရပြီး 4.10.2012 တွင် ထပ်မံပြသသောအခါ parlodel 25mg ကိုတရက်တလုံး နှစ်ပတ်သောက်ပြီးလျှင် တရက်လျှင် နှစ်လုံးနှစ်ပတ်သောက်ရန် ညွှန်ကြားပါသည်။ ဆေးစစသောက်ချင်း ခေါင်းမူးပြီး အန်ချင်သလိုလို ဖြစ်သောကြောင့် 11.10.2012 တွင် ထပ်မံပြသရာ တရက်တလုံးနှင့် တလသောက်ပြီးလျှင် ယခင် စစ်ခဲ့သော နေရာတွင် prolatin level ပြန်စစ်ပြီး ပြန်လည်ပြသရန်ညွှန်ကြားပါသည်။ 11.11.2012 result prolatin level 6.94 ဖြစ်ပါသည်။ 13.11.2012 တွင် ဆရာမက prolatin level ကျသွားသောကြောင့် ခွဲစိတ်စရာမလိုဟုပြောပြီး တရက်ခြား တလုံးကို တလပြန်သောက်စေပါသည်။ 13.12.2012 တလပြည့်ပြီး ပြန်သောအခါ ထိုနည်းအတိုင်း ပြန်သောက်ခိုင်းပြီး တလပြည့်လျှင် prolatin level ပြန်စစ်ပြီးပြန်ပြရန်ပြောပါသည်။ 3.9.2012 ရာသီပေါ်ပြီးနောက် 16.10.2012 နှင့် 16.11.2012 တွင်ရာသီပေါ်ပါသည်။ အားနည်းလျှင်နည်းသလို နောက်ဆုတ်သွားတတ်ပါသည်။ သို့သော်ဆုတ်လျှင်လည်း အများဆုံး နှစ်ပတ်လောက်ပဲဆုတ်တတ်ပါသည်။ သွေးအား ကောင်းစေရန် Viferron သောက်ပါသော်လည်း 29.12.12 ထိရာသီမပေါ်သေးပါ။ 24.12.12 တွင် ညာဘက် ရင်ဘတ်မှ အရည်ကြည် အနည်းငယ် နှစ်/သုံးစက်ထွက်လာပါသည်။ နောက်တော့ မထွက်တော့ပါ။ 12 လပိုင်း အလယ်ခန့်တွင် ရင်သားထဲမှ အောင့်ပြီး အနည်းငယ်လျော့တွဲလာသည်ဟု ခံစားရသည်။ ဒီရက်ပိုင်း 25.12.2012 မှစပြီး ရင်သားများ တင်းလာပြီးအထဲမှအောင့်နေုပြန်ပါသည်။
Hyperprolactinaemia (ဟိုက်ပါ ပရိုလက်တင် နီးမီးယား) ဆိုတာ သွေးထဲမှာ ဟော်မုန်းတမျိုးများနေတဲ့ ရောဂါပါ။ Prolactin ဆိုတာ နို့ထွက်စေတဲ့ ဟော်မုန်းဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်ထဲက Pituitary gland ဆိုတာကနေ Prolactin ဟော်မုန်း ထုတ်ပေးနေတာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ နို့ရည် မထွက်ခင်မှာ ရင်သား ဖွံ့ထွားစေဘို့ သူက လုပ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေး နို့တိုက်ချိန်မှာ များလာတာကို ရောဂါမခေါ်ပါ။ မိန်းမမှာသာရှိတယ် မထင်ပါနဲ့။ ယောက်ျားတွေမှာ 450 mIU/L အထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ 580 mIU/L အထိ ရှိနိုင်တယ်။ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ဆက်ပြီး ဒီရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အမျိုးသမီး ၉-၁၇% အထိ ရှိနိုင်တယ်။ ကျားရော မပါ ပေါင်းရင် ဝ့၎% ရှိတယ်။
(ဟိုက်ပါ ပရိုလက်တင် နီးမီးယား) ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ -
• အရွယ်ရောက်ချိန် နောက်ကျတယ်။
• အမျိုးသမီးမှာဖြစ်ရင် ၉ဝ%၊ ယောက်ျားဆိုရင် ၁ဝ-၂ဝ% မှာ Galactorrhoea နို့ရည်ထွက်တယ်။
• အမျိုးသမီးတွေမှာ ၉၅% မှာ ရာသီမမှန် ဖြစ်တယ်။ ရာသီဆင်းတာလဲ နည်းမယ်။ တချို့မှာ မလာဘဲ နေမယ်။ (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်း နည်းပြီး မျိုးဥမထွက်လို့ ကလေးမရတာ ဖြစ်တယ်။ ရင်သားနာမယ်။ လိင်စိတ်နည်းမယ်။ လိင်ဆက်ဆံရင်လဲ နာစရာ မဟုတ်ဘဲ နာမယ်။ ယောက်ျားတွေလို အမွှေး ပေါက်နိုင်တယ်။
• ယောက်ျားတွေမှာ ဖြစ်ရင်လဲ လိင်စိတ်နည်းမယ်။ ပန်းညှိုးမယ်။ ကလေးမရ ဖြစ်မယ်။ နို့က မိန်းမလို ဖြစ်လာမယ်။
• ဦးနှောက်ထဲက အကျိတ်ကြောင့် မျက်စိအမြင် ထိခိုက်လာနိုင်တယ်။
• Osteoporosis အရိုး-အားနည်းရောဂါလဲ တွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဘာလို့ ဖြစ်ရသလဲဆိုရင် -
• စိတ်ဖိအား များရင်လဲ ဖြစ်တယ်။
• ဦးနှောက်ထဲက Hypothalamus နဲ့ Pituitary gland နေရာတွေမှာ တခုခုဖြစ်ရင်၊ ခေါင်း ခိုက်မိတာ၊ ဦးနှောက် ခွဲစိတ်ကုသခံရတာနဲ့ ဓါတ်ကင်တာ၊
• Langerhan's cell histiocystosis ရောဂါ၊ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း နည်းရောဂါ၊ Cushing's syndrome ရောဂါ၊ Polycystic ovary syndrome မျိုးဥအိမ် အိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်တော့တာ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ အသဲရောဂါ၊
• ဆေးဝါးတွေကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Alpha-methyldopa, Bezafibrate, Cimetidine, Cisapride, Domperidone, Haloperidol, Methyldopa, Metoclopramide, Minoxidil, Neuroleptics, Oestrogens and TRH, Omeprazole, Opiates, Phenothiazines, Protease inhibitors, Ramelteon, Reserpine, Trifluoperazine, Verapamil ဆေးတွေ ပါတယ်။
ဆေးစစ်ရင် ဒါတွေ လုပ်ရမယ်။
• Prolactin blood levels သွေးစစ်မယ်၊
• X-ray ဓါတ်မှန်ရိုက်မယ်၊
• Magnetic resonance imaging (MRI) (အမ်-အာရ်-အိုင်) ရိုက်မယ်၊
• Computed Tomography (CT scan) (စီ-တီ-စကင်) ရိုက်မယ်၊
• Thyroid and renal function ကျောက်ကပ်နဲ့ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း စစ်မယ်၊
သွေးစစ်အဖြေက အထဲကရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ သွေးဖေါက်ရင်း စိတ်ဖိစီးမှု ရှိနေနိုင်လို့ ၂-၃ ခါ ပြန်စစ်ရတတ်တယ်။
• ≥3,000 mU/l ဆိုရင် Microprolactinoma (အသေး) ရော Macroadenoma (အကြီး) ပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ≥6,000 mU/l ဆိုရင် Macroprolactinoma ဖြစ်မယ်။
• 3,000-6,000 mU/l ဆိုရင် Macroprolactinoma ရော Macroadenoma ရောဖြစ်နိုင်တယ်။
• 5000 mU/L ကျော်နေရင် Prolactinoma (အကျိတ်) ရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Macroprolactinoma နဲ့ Macroadenoma ကို MRI နဲ့ သေခြာစေရတယ်။ ဦးနှောက်ထဲက အကျိတ်ဟာ 10mm ထက် ငယ်ရင် Microprolactinomas သတ်မှတ်တယ်။ Macroprolactin ဆိုတာ ရောဂါလက္ခဏာကြောင့် ခေါ်တာ မဟုတ်ဘဲ၊ သွေးစစ်လို့ တွေ့ရတာကြောင့် ခေါ်တာပါ။
1. Cabergoline ဆေးကို အများဆုံး သုံးတယ်။ Dopamine agonists အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။
2. Bromocriptine ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆို ဒီဆေးပေးနိုင်တယ်။
3. Lisuride တခါတလေ ဒီဆေးပေးတယ်။
4. Norprolac ဆေးသစ်မှာ Quinagolide ဆေးပါတယ်။
5. Vitex agnus-castus extract ဆေးကို အသင့်အတင့်သာ ဖြစ်သူတွေကို ပေးနိုင်တယ်။
Cabergoline (၈၃%)၊ Bromocriptine (၅၉%) ထိရောက်တယ်။ တပတ်မှာ ၂ ရက်သာ သောက်ဘို့ လိုတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ နည်းတယ်။ ခေါင်းမူးတတ်တယ်။ ပျို့အန်ချင်တယ်။ နေ့ခင်း အိပ်ပျော်တတ်တယ်။ ဆေးကို အစာစားနေတုံး သောက်သင့်တယ်။ ဆေးအဆ နည်းနည်းက စသင့်ရင် စရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် နဲ့ နို့တိုက်ချိန်မှာ ဆေးဖြတ်ထားတယ်။
• Cabergoline ဆေး ၆ ပတ်ပေးပြီး MRI ပြန်လုပ်ရင် Microprolactinoma က သေးသွားတာ တွေ့ရမယ်။ Macroadenoma ဆိုရင် သေးမသွားဘဲ ခွဲစိတ်ကုသရမယ်။ Prolactin ကျမယ်၊ Oestrogen ပြန်တက်မယ်။
• ကိုယ်ဝန်ရှိချင်ရင် Bromocriptine ဆေးပေးသင့်တယ်။ ဒီဆေးကြောင့် ကလေး ပုံမှန်မဟုတ်တာ၊ ကိုယ်ဝန် ပျက်တာ ထူးဖြစ်တယ်လို့ မတွေ့ပါ။ Cabergoline ဆေးကိုတော့ သုတေသန နည်းသေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် ဦးနှောက်ထဲက အကျိတ် နဲနဲပိုကြီးလာနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် Macroadenomas တွေက အဲလို ဖြစ်တတ်တယ်။
• ဆေးပေးတာ ကြာရတယ်။ တသက်လုံးပေးရ-မပေးရ စမ်းသပ်နေတုံးဘဲ။
• ခွဲစိတ်တာက အကျိတ်သေးအောင်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ အမြဲတော့ မလုပ်ရပါ။ ၅-၁ဝ% လောက်ကဘဲ ဆေးနဲ့ မသက်သာ၊ ဆေးကိုမခံနိုင်တာ ဖြစ်လို့ ခွဲဘို့လိုတယ်။ ခွဲရသူထဲက ၇ဝ-၈ဝ% မှာ Hypopituitarism ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဓါတ်ကင်တာလဲ လုပ်ပါတယ်။ ပြန်မဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒီလိုလုပ်ရင် Hypopituitarism ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• Macroprolactinomas ဖြစ်နေရင် ၃ဝ% လောက် ပျောက်မယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ သွေးဆုံးချိန်။
• Microprolactinomas ဖြစ်နေရင် ၈ဝ% ကျော်လောက် ပျောက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ Hypopituitarism ဖြစ်လာတတ်ပြီး ပြန်ပေါ်တတ်တယ်။
• Microprolactinoma ကနေ Macroprolactinoma ကို ပြောင်းတယ်ဆိုတာ ရှားတယ်။
• မအေမှာ ဒီရောဂါရှိလို့ သူ့ကလေးမှာ လာဖြစ်တာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။